Soo dejisan Smart Defrag 6.5.0.89 – Vessoft
WindowsNidaamkaDisks adagSmart Defrag
Bogga rasmiga ah: Smart Defrag
Defrag Smart – software ah defragments cajaladaha iyo bixisaa itimaalka yar oo ka mid ah nadaamka joojinta, oo qiilqiil iyo shilalka. software The defragments files iyo hufnaan iyaga u qaybisey disk la tixgelin inta jeer ee isticmaalka, in hoos u waqtiga helitaanka iyo kordhisaa wax qabadka guud ee nidaamka. Smart Defrag waa inay awoodaan inay si madaxbanaan u qabtaan falanqayn ka dib markii taas oo gobolka qaybsanaanta file on disk la soo bandhigay. Defrag Smart taageertaa shaqada ee hababka defragmentation caadiga ah ama qoto dheer la qorsheeyey waqti cayiman.
hababka kala duwan defragmentation
Defragmentation on jadwalka
Soo dejisan Smart Defrag
Faallo ku saabsan Smart Defrag
Smart Defrag Xirfadaha la xiriira